Dhalinyarada Muqdisho oo ku dhacay dabin Farmaajo u qoolay | KEYDMEDIA ONLINE
Dhalinyarada Muqdisho oo ku dhacay dabin Farmaajo u qoolay
Kuwii danbiyada galay ee dalka halligay haddii aad abaal mariseen, yaa wax laga weydiin doonaa gabbood-falladii dhacay afartii sano ee la soo dhaafay, yaase la xisaabtami doona?
MUQDISHO, Soomaaliya - Maalin ka hor waxaa Caasimadda Soomaaliya ee Muqdsho, lagu qabtay kulan laga soo qaban qaabisay Madaxtooyada, kaas oo dadka loo sheegay in loogu mahad celinayay Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Yare Cali, hayeeshee, ujeedka kulanku wuxuu ahaa mid intaas ka fog.
Kadib afar sano oo kadeed ah, Kooxda Farmaajo, waxa ay kulankaas u qabteen in ay mar kale tijaabiyaan heerka uu marayo baraarugga dhalinyarada Muqdisho, kuwaas oo sida muuqda ku dhacay dabin la soo qoolay.
Kulankaan tijaabada ah, wuxuu hordhac u ahaa kulamo kale, oo wata magaca mahad celin, isla-markaana ay Muqdisho ku qabsan doonaan, eedeysanayaasha dalka kadeeyay afartii sano ee la soo dhaafay ee Farmaajo, Fahad, Biixi, Xijaar, Sakariye Xaaji, Dubbe iyo kuwo kale hormuud u yihiin ee dhalinyaro kulamadaasna ma ka qeyb gali doontaan?
Mid ka mid ah, kobo-qaadyadii ugu waaweynaa, ee u sacaba tumayay Farmaajo, kuna garab taagnaa dhibaatadii uu ku hayay dadkiisa iyo degaankiisa, ayaad abaal-mariseen, halkii aad taas baddalkeed la xisaabtami lahayseen.
Nasiib-xumo, wuxuu mar kale abaabulayaa kulan loo qabanayo Farmaajo, adinka ayuuna idin ku casuumi doonaa, ee maxaad Farmaajo uga mahad celin doontaan, ma ooyinta waalidiinta Soomaaliyeed ee maalin kasta qubaneysa?, ma hooyooyinka waddoonyinka ku umul raacanaya?, mise waxaad ku amaani doontaan inuu idin ku qasbay in aad meydkiinna garbaha ku qaadataan?
Shaqsiyaadka danbiyada galay, ha loo aqoonsado kaankare in la gooyo mooyee aan daawo kale lahayn, waa in la aqbalin ka qeybgalka xaflado ceynkaas ah, isla-markaana lagu hor mudaharaado, goobaha ay ku xafladaha ku qabsanayaan, laguna xisaabtamo dhibkii ay geysteen.